Black Hole Ny Mpandahateny - Famolavolana
Ny Mpandahateny Black Hole namboarina teo amin'ny fototry ny teknolojia marani-tsaina maoderina, ary miteny amin'ny finday portogey io. Mety ho mifandray amin'ny telefaona finday misy sehatra maro samihafa, ary misy seranan-tsambo USB ahafahana mifandray amin'ny fitahirizana portable ivelany. Azo hazavana ho jiro latabatra ny jiro mipetaka. Ary ny endrika manintona amin'ny Black Hole dia mahatonga azy io ho azo ampiasaina amin'ny famolavolana anatiny ny homeware.
Anaran'ny tetikasa : Black Hole, Anaran'ny mpamorona : Arvin Maleki, Anaran'ny mpanjifa : Futuredge Design Studio.
Ny Mpandahateny Arvin Maleki Black Hole